Mailer box also name cardboard postal boxes,shipping box, aircraft box or delivery box which widely use in packaging for garment, လက်ဆောင်, 3c electronic ect. with strong and sturdy. Most of the mailing box are come with E flute corrugated paper coated with 250-300 gsm art paper and there are two colors of E flute corrugated paper- white background & brown. It’s usually in CMYK printing, outside or inside as you want.
Mailing box, good for the express transportation with light, ထုတ်ကုန်များအတွက်အားကောင်းတဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး function ကို. ဒါကြောင့်ခေါက်နိုင်သောသေတ္တာများတစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာကတည်းက, ဒါကြောင့်သိုလှောင်မှုနေရာချွေတာ, ထုတ်ကုန် '' အထုပ်ကုန်ကျစရိတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေကုန်ကြမ်းနှင့်အတူကယ်တင်ပါ.
ပစ္စည်း Factory custom logo cheap rigid corrugated mailer shipping box
အရွယ်အစား စိတ်ကြိုက် (length×width×height in cm)
ပစ္စည်း White board 250g 300g 350g 400g 450g
Special paper Please contact customer services staff Corrugated paper A,ခ,ဂ,E,F(flute)
ထုပ်ပိုး With standard export carton or as your request
ကြာမြင့်ချိန် 7-15 ရက်ပေါင်း
နမူနာ စတော့ရှယ်ယာနမူနာအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်, printed sample fee can be refundable
ဒီဇိုင်း As customers’ request
စိတ်ကျေနပ်မှုသည်အထိတစ် ဦး မှတ ဦး တည်းထုံးစံဝန်ဆောင်မှု
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အားလုံးစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်. မည်သည့်အရွယ်အစားမဆို, ပုံစံ, ဒီဇိုင်းများ, logos can meet your requirement that all we can do.
အနုပညာလက်ရာများအမျိုးအစား: PDF, အာအိုင်, CDR.
2) သင့်ကိုယ်ပိုင်လိုဂိုနှင့်အတူနမူနာပါ: သင်မှာယူပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်နမူနာအခကြေးငွေကိုအမြောက်အများထုတ်လုပ်နိုင်သည်
3)နမူနာ ဦး ဆောင်အချိန်:3-5ရက်ပေါင်း
1) စက်ရုံသည်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး၊. အရည်အသွေးကိုကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်သည်.
3) <24 နာရီအလျင်အမြန်တုံ့ပြန်ပါ
မျက်နှာချင်းဆိုင်ဝန်ဆောင်မှု, အီးမေးလ်နှင့် TM မှဆက်သွယ်မှုမျှသာမဟုတ်ပါ, ဗွီဒီယိုတွေ့ဆုံခြင်းသည်ပိုမိုထိရောက်သည်
ငါတို့အဘို့အရွှေ Verify ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ကြသည် 10 နှစ်, Alibaba ကုန်သွယ်ရေးအာမခံတွင်သင်ပေးနိုင်ပါသည်, သင်ကုန်ပစ္စည်းလက်ခံရရှိပြီးနောက်ငွေပေးချေမှုကိုအတည်ပြုပါ, နောက်မှမင်းတို့ရဲ့ပိုက်ဆံကို Alibaba ဆီကရတယ်.
1 အသုံးပြုခြင်း2ဂျာမနီ5အရောင် Heidelberg ပုံနှိပ်စက်
2 တစ်ခုချင်းစီကို5ပုံနှိပ်ခြင်းအပေါ် Mins နမူနာ
3 တစ်ခုချင်းစီကို 15 Lamination အပေါ် Mins နမူနာ
4 3% Mass ထုတ်လုပ်မှုတွင်နမူနာ
ဘယ်အချိန်မှာအမှာစာ, ဦး သည်ထုတ်လုပ်မှုကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်, အပတ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ Alibaba ကိုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပေးရမယ်, ပြီးတော့မင်းရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေကိုစစ်ဆေးပါ
Guangzhou Ouhai ပုံနှိပ်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီလီမိတက်, we areaprofessional paper bag manufacturer with 15 years experiences in china, coveringnear 5000 square metros of workshop area, with an excellent team composed of 50 professionals and more than 20 skilled workers.
4. Various products. Corrugated boxes, စက္ကူသေတ္တာများ, gift boxes, jewelry boxes, cosmetic boxes, food boxes, paper bags and so on.
1. သင်၏လိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်, ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်အသစ်များနှင့်ပတ်သက်။ အကြံဥာဏ်ပေးခြင်းအဖြစ်, ထုတ်ကုန်အတွက်သင့်အားဓာတ်ပုံများပြသခြင်း, ဖောက်သည်လိုအပ်ပါကအချို့နမူနာပေးပို့ပါ.
2. သင်၏ထုတ်ကုန်များကိုစစ်ဆေးရန်သင်၏ ၀ န်ထမ်းများအားပေးပို့ရန်ကြိုဆိုပါသည်, သင်၏ ၀ န်ထမ်းများကိုသူတို့နေရာတိုင်းမှကောက်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့ကားတစ်စီးပေးနိုင်ပါသည်.
*OEM ထုတ်လုပ်သူ, Offset ပုံနှိပ်ခြင်း
1. မေး: ငါကိုးကားချင်လျှင်အဘယ်သတင်းအချက်အလက်သင်သိသင့်တယ်?
5) ဖြစ်နိုင်လျှင်, please also provide with pictures or design for checking. Sample will be best for clarifying, မရရှိလျှင်, ကျနော်တို့ကိုးကားစရာအသေးစိတ်နှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်အကြံပြုပါလိမ့်မယ်.
2. မေး: Can i getasample before mass production?
က: Of course! The normal produce progress is that we will make the pre-production sample for you to check the quality and design. The mass production will be started after we get your confirmation on the sample.
3. မေး: How long can i get the sample?
က: After receiving the sample fee and all the material & design being confirmed, the sample lead time is about 3-5 working days and express delivery will take about 3-5 days to your door.
4. မေး: How long is the mass production lead-time?
က: Usually 10-20 ရက်ပေါင်း, rush order is available.
5. မေး: Is the sample charge can be refundable?
က: Normally, if the quantity of your order is above 3000pcs, the sample charge can be refundable.
6. မေး: Do you have stock paper boxes for sale?
က: All our products are designed and made according to customer's demand. We have no standard lines available from stock.
7. မေး: What is your minimum order quantity?
က: Asageneral rule our MOQ is 1000pcs. Although on occasions we have orders for less than 1000. သို့သော်, for one of small orders costs are likely to be very high when compared with the 1000 pcs order.
8. မေး: Are youamanufacturer oratrading company?
က: We areamanufacturer in the printing & packaging area for more than5နှစ်ပေါင်း. Right now we have more than 300 workers in our factory in Guangzhou. Our products comply with ISO9001:2008 and BV. We are the AAA grade